U-doodista - Isbahaysiga Caafimaadka ee Muhaajiriinta & Qaxootiga
Maaddaama aan nahay urur diiradda saaraya bulshada, mid ka mid ah yoolalka aan higsaneyno waa inaan ku xoojino xubnaha bulshada kheyraad kaa caawinaya inaad la socodsiiso xog-ogaalnimada, ka-qaybqaadashada, iyo u doodista muhaajiriinta iyo qaxootiga ku sugan Washington. Halkan, waxaan kugu xireynaa qaar badan oo ka mid ah ururada, shabakadaha iyo isbahaysiyada ka shaqeeya shaqadan gobolka Washington iyo qaran ahaanba. Mid kasta oo ka mid ah ururradan wuxuu bixiyaa macluumaad, ilo dheeri ah, iyo baaqyo ficil ah oo loogu talagalay xubnaha bulshada ee raba inay ku biiraan dagaalka sinnaanta caafimaadka iyo soogalootiga iyo xuquuqda qaxootiga. Guji agagaarka oo, haddii aad awoodo, amaahdo codkaaga. Wadajir, waan ka cod dheer nahay.
Ururada u doodista:
Midowga Xoriyadaha Madaniga ah ee Mareykanka (ACLU) ee Washington: Xiriirkan dawladeed ee ACLU wuxuu ka shaqeeyaa sidii loo hubin lahaa caddaaladda, xorriyadda iyo sinnaanta inay yihiin xaqiiqooyin dhammaan dadka ku nool gobolka Washington, iyadoo si gaar ah isha loogu hayo xuquuqda dadka iyo kooxaha taariikh ahaan xuquuqdooda lagala noqday.
Xarunta Sharciga Socdaalka Qaranka (NILC): NILC waa mid kamid ah ururada hormoodka ka ah Mareykanka gaar ahaan u heellan difaaca iyo hormarinta xuquuqda dadka soo galootiga ah ee dakhligoodu hooseeyo.
U doodayaasha Sharciga Caafimaadka Waqooyi-Galbeed (NOHLA): NOHLA waxay ka shaqeysaa hagaajinta helitaanka daryeelka caafimaadka ee dhammaan dadka deggan Washington si loo hormariyo caafimaadka iyada oo ah xuquuq aadanaha. Waxay ku hawlan tahay dadaallo ballaadhan oo u-ololeyn ah si loo ilaaliyo dadka deggan gobolka Washington.
Mashruuca Xuquuqda Muhaajiriinta ee Waqooyi Galbeed (NWIRP): NWIRP waxay sare uqaadaa cadaalada adoo difaacaya iyo hormarinta xuquuqda soogalootiga iyadoo loo marayo adeegyo sharci oo toos ah, u doodid nidaamsan, iyo waxbarashada bulshada.
Mid Mareykan ah: Mid ka mid ah Mareykanka waa hay'adda ugu weyn ee u doodda soogalootiga iyo qaxootiga ee Gobolka Washington. Waxay kaalin firfircoon oo hoggaamineed ka ciyaaraan isbahaysiga gobolka iyo qaran ee ka shaqeeya xuquuqda muhaajiriinta, waxbarashada, caddaaladda dhaqaalaha iyo deegaanka, xuquuqda codbixinta, iyo is-dhexgalka soogalootiga.
Ilaalinta Qoysaska Muhaajiriinta (PIF): PIF waa olole ka kooban boqolaal ururo kala duwan. Hadafkeedu waa in loo midoobo sidii loo horumarin lahaa, loo ilaalin lahaa loona difaaci lahaa helitaanka daryeelka caafimaadka, barnaamijyada nafaqada, adeegyada bulshada iyo taageerada dhaqaale ee soogalootiga iyo qoysaskooda heer degmo, gobol iyo heer federaal.
Badbaadinta Daryeelka Caafimaadka ee Washington (SHCW): Shabakadan udoodida aasaasiga waxaa hogaamiya xarumaha caafimaadka bulshada ee gobolka Washington. Ujeeddadeedu waa in wax la baro, la xoojiyo lana hawlgeliyo dadka daneynaya hubinta in qof walba uu helo fursad daryeel caafimaad oo la awoodi karo.
Shabakada Wadajirka ah ee Soogalootiga Washington (WAISN): WAISN waa shabakad u heellan la dagaalanka caddaaladda soo galootiga. Hadafkeedu waa in la ilaaliyo lana hormariyo awoodda bulshada soo-galootiga iyo qaxootiga iyada oo loo marayo isbahaysi jinsiyo badan, luqado badan iyo diimo badan leh.
Dib loo eegay 6/22/2021
Yaa ku matalaya?
Dhagsii xiriirka oo gal cinwaankaaga si aad u hesho sharci dejiyeyaashaada gobolka ama Xubnaha Koongaraska.
Soo hel Saraakiishaada aad dooratay